Madaxweyne Trump oo dib ugu laabtay Aqalka Cad
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo laga daweynayay xanuunka Covid19 ayaa markii ugu horreysay dib ugu laabtay xafiiskiisa Aqalka Cad Arbacadii Shalay, tan iyo markii loo ogolaaday inuu ka bixi karo isbitaalka.
Madaxweynaha ayaa socod lug ah oo uu kasoo billaabay halka uu Aqalka Cad ka daggan yahay ku tagay xafiiskiisa rasmiga ah, si uu uga warbixiyo hakadka ku yimid wadahadallada ku saabsan gargaarka dhaqaale ee lagu baritaarayo dadka uu sameeyay Corona-Virus iyo duufaanta Delta sida uu sheegay aqalka cad.
Trump ayaa xilligaasi waxyar kadib bartiisa Twitterka ku xaqiijiyay, in looga warbixiyay duufaanta islamarkaana uu gudoomiyeyaasha gobollada Texas iyo Louisiana uu kala hadlay u diyaargarowgeeda.
Dhaqtarka Aqalka Cad ee Sean Conley ayaa Arbacdii sheegay in madaxweyne Donald Trump uusan laheyn calaamadaha cudurka 24kii saac ee lasoo dhaafay islamarkaana xaalada madaxweynaha ay hadda dagan tahay.
Trump iyo ninka doorashada kula tartamaya ee Joe Biden ayaa labadaba waxay sheegeen talaadadii, inay diyaar u yihiin dooddoodii labaad oo todobaadka soo socoda loo ballansan yahay, laakiin arrinka Corona-Virus ee madaxweyne Trump asiibay ayaa sare u qaaday su’aalaha hareeyay sida uu noqonayo baratcoolka caafimaad ee doodda. Musharixiinta madaxweyne.
Biden oo la weydiiyay xaaladda badqab ee ka qeybgalka doodda ayaa wariyeyaasha u sheegay, inuu rajeynayo in la raaco dhamaan tilmaamaha ka hortagga ee xanuunka, isagoo intaa ku daray hadii madaxweynaha uu wali hayo Covid19 ay tahay inaysan wax dood ah yeelanin.
Trump ayaa sheegay inuu fiidnimada Khamiista ee 15 october uu diyaar yahay ka qeybgalka doodda oo ka dhacaysa magaalada Miami sida uu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka